नारायणी किनारमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता - The Global Expose
ग्लोवल एक्सपोज, (काठमाडौं-मंसीर २४) । नारायणी नदी किनारमा गुरुयोजनाअनुसार पर्यटकीय पूर्वाधारका कामलाई तीव्रता दिन थालिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले तयार गरेको गुरुयोजनाअनुरुप नदी किनारलाई आकर्षक बनाएर पर्यटकीय केन्द्र बनाउन लागेको हो ।
उनका अनुसार पैदल पथ (वाकवे), पार्किङ, बगैँचालगायत काम गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । गत वर्ष नारायणी नदी किनारमा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनसँग सहकार्य गरेर रू. एक करोड हाराहारीको काम सम्पन्न भएको छ । दाहालले भनिन्, ‘हाम्रो आग्रहलाई संघीय सरकारले सम्बोधन गरेको छ । अब नारायणी नदी किनार आकर्षक पर्यटकीय केन्द्र बन्नेछ ।’
मन्त्रालयका पर्यटन विभागका इञ्जिनीयर सचीन्द्र यादवका अनुसार नारायणी नदी किनारलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन महानगरको गुरुयोजनाअन्तर्गतको २ दशमलव ४ किलोमिटर वाकवे, एक सय हाराहारी चारपांग्रे सवारी अट्ने दुईओटा पार्किङ स्थल, बगैँचालगायत निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।
डेढ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । बजेट सीमा रू. ६ करोड ५० लाख रहेको छ । क्रमशः गुरुयोजनानुसार अन्य काम गरिँदै लगिने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
खनालका अनुसार त्यस भू–भागलाई पाँच भागमा विभाजन गरेर संरचनाहरु निर्माण गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन परामर्शदाता कम्पनीले तयार गरेको हो । रू. २९ करोड ३१ लाख खर्च हुने गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । नदी किनारको दुईतर्फको छेउमा हाल भएको संरचनालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
बीचको भागमा धार्मिक क्षेत्र, प्रदर्शनी क्षेत्र र खेल क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै स्थान तय गरिएको छ । ती क्षेत्रभित्र पैदलमार्ग, साइकल मार्ग, प्रदर्शनी क्षेत्र, आरती क्षेत्र, धार्मिक प्रवेश क्षेत्र र हरियाली क्षेत्र रहनेछन् ।
ग्लोवल एक्सपोज, (काठमाडौं-मंसीर २४) नेपालका लागि बीएमडब्ल्यू मोटर्सको आधिकारिक आयातकर्ता लक्ष्मी प्रिमियम मोटर्सले बीएमडब्ल्यू ब्रान्डको आधिकारिक बिक्री सुरु गरेको छ । कम्पनीले काठमाडौंको तीनकुनेको शोरुमबाट […]